Goobta Computer Science and Technology
Waxyaabaha aad xiiseeyso Compiler construction
AminaDiamond added a post in a topic: Hadii uu mobile kaada culeys noqdo sideed ku yareyn kartaa culeyskaas? 19 Dec 2015
Markaan ka hadalno culeyska mobile ka waxa sababo waa application ka badan oo lagusoo download gareeyo, sidaa darteed haduu mobile kaada culeys kaa noqdo waxaad sameysaa format kadibna waxaad kusoo shubataa kaliya application aad rabto sababta oo eh mobile markaad xili badan isticmaasho waxaa laga yaabaa inaad kusoo shubto application badan lakiin xili dambe waxaad dareemee mobile ka inuu culeys saa id noqdo sidaa darteed hadaad rabto inuu mobile dhakhsi ukaco iska format gareey adoo maraayo sida tan:
waxaad sameysaa format adoo ka dooranaayo mobile kaada Setting Optionkadib na click sii Backup and resetBackup and reset waxaad kasii taktaa Factory data reset click siifactory data reset waxaad kasii taktaa Reset Device click siireset Device dheh waxaa laga yaabo inuu ku weydiiyo Pin cord mar marne waxaaba laga yaabaa in uusan Pin cord ku weydiin oo kaliya reset Device markaad dhahdo uu direct isku format gareeyoPin Cord waa number ka aad markii aad mobile screen xiraneysay password ka aad ku xirtay Number ka aad galisay kadibna asiga ayaa is format gareynaayo. F.G: Mobile wixii kuugu jiro oo dhan wey tirtirmaayaan wuxuu noqonaa mobile ka sidii markii aad soogadaneysay oo kale speed ka mobile kane wuxuu noqonaa fudeyd halkii markii hore uu culeys kaa ahaa.
AminaDiamond added a post in a topic: Waa Maxay Farqiga Udhaxeeyo HTML & CSS? 13 Oct 2015
Farqiga udhaxeeyo HTML iyo CSS?
HTML (Hypertext Markup Language):waxaad u isticmaali kartaa si aad ugu abuuratid macluumaadka Webpage taasoo lamacno tahay html waxaad ku qeexan kartaa asaaska muuqaalka iyo macluumaadka website kaada.
Tusaalo: HTML wuxuu masuuliyad ahaan leeyahay markaad rabto inaad qorto qoraal (text written) iyo qaabkooda wuxuu leeyahay waxa looyaqaano block . block kaas oo kuu qeexaayo halka aad ku qoran leheyd sida header block,body block waa halka aad ku qoran kartid dhamaan macluumaadka aad rabto inuu webpage kasoo muuqdo waxa eyna ku xirantahay macluumaadka aad haysto ood rabto inaad kusoo qoroto webpag kaada and navigation block iyo kuwa kaloo badan .CSS (Cascading Style Sheets ) :CSS waxa uu masuuliyad ahaan leeyahay naqshadeynta webpage ka iyo sida muuqaalka u ekaan lahaa website kaada.
Tusaalo: CSS wuxuu masuuliyad ka yahy sida uu qoraalkaada uu unoqon lahaa color kala duwan tusaale blue,cadaan,cagaar iyo noocyo kaloo badan iyo sida aad halka aad wax kuqoreyso ugu sameyn leheyd shape kala duwan sida inaasoo wareejisid geesaha naqshada (round edges) iyo kuwa kaloo kaa saacidaayo sida aad ugu naqshadeyn leheyd website kaada.
AminaDiamond added a post in a topic: sideed kuheli kartaa noocyada software da ugu dambeeyay adoo isticmaalaayo mobile kaada? 26 Aug 2015
Hadaba sida aan la socono smart phone wuxuu leeyayahay banaamijiyo kala duwan markastaane waxaa soo baxo noocyada ugu dambeeyo
hadaba sideen ku heli karnaa noocyada ugu dambeeyay software da adoo ka isticmaalaayo mobile kaada :
marka ugu horeyso waxaad fiirisaa mobile kaada inuu internet ka ku xiranyahay ama uu daaranyahay WiFi ha kadibwaxaad click siisaa Apps button ka ah mobile kaadakadib waxaad taktaa setting Menu kadib click dheh waxaad kasii doorataa About device icon ka eh kadibne click sii Software updatekadibne waxaad doorataa Updatekadibna click sii OK sitoos ah software kuugu jiro mobile kaada ayaa update u noqonaayo kadibne OK dheh markuu update ka dhameeyo
AminaDiamond added a post in a topic: Qiso ku saabsan fadliga ey leedahay SADAQADA 7 Jul 2015
Qisadani waxey noo sheegaysaa fadliga ey leedahay SADAQADA
hada kahor waxaa dhacday qisada tan:
Nin ayaa waxaa ku dhacay cudurka kansarka(saradhaanka) wuxuuna tagay isbitaal. Doctor ayaa wuxuu yiri ma'aqaano waxaan ku dhaho qaliinkaada heerkiisa aan ku guuleysan karno kaliya waa boqolkiiba shan(5%). Ninkii bukaanka ahaa wuxuu ku yiri kaliya boqolkiiba shan (5%) miyaa lagu guuleysan karaa taasoo macnaheedu tahay sagaashan iyo shan boqolkiiba (95%) waa lagu guuldareysan karaa ama naftaada ayaad ku weyn kartaa. Doctor wuxuu yiri sababta oo eh cudurka Kansarka(saradhaanka) jirkaada intiisa badan ayuu ku faafay Ninkii jiranaa ayaa wuxuu ku yiri doctor waxaad isiisaa Isbuuc si aan cideyda ula soo dardaarmo una soo diyaargaroowo. Doctor wuxuu ku dhahay Ninkii jiranaa haye isbuucaas ane waxaan sii diyaarinaa dawadii qaliinka iyo qolkii qaliinka ku gali leheyd waxaana ninkii jiranaa lagu dhahay in shaa allah dhib ma'arkeysid. Ninkii cudurka Kansarka qabay intuu xaafadiisa usii socday wuxuu arkay qof haween ah oo misane da'deeda weyntahay oo meesha qashinka lagu shubo taagan. wuxuuna ku bilaaway sida tan Asalaamu calykum ayeeyo maxaa meesha kasameyneysaa. Haweeneydi da'da weyneyd ayaa ku jawaabtay wacaleykumu salaam wiilkeygiyow waxba kama sameyneynin meeshaan. Ninkii jiranaa baa ku celiyay markale Asoo cizeynaayo haweeneydi kuna yiri bal iisheek maxaad kasameyneysay meesha qashinka kor ayaan ka arkay adoo bacyaha gadinaayee. Haweeneydi da'da aheyd waxey ugu jawaabtay waa sax sida aad arkeysaybo bacyaha ayaa gadinaayay qashinka kujiro sababta oo eh waxaan haayaa ciyaal aan ayeeyo u'ahay oo waalidkood dhinteen ane lacag uma haayo aan wax cunto eh ugu soo gado ;sidaas darteed ayaan qashinka uga baaraayay cunto ama wax ey dadka iska sooreebeen si'aan ciyaalka ayeeyada u'ahay usiiyo. Ninkii jiraan ayaa ku yiri allah ayaa weyn intuu waday Haweeneydii ayuu wuxuu ugeeyay nin hilib le'eh wuxuuna kuyiri haweeneydaan waxaad sii saa labo kilo oo hilib eh isbuuc kasto lacagtane ilaa hal sano aniga ayaa dhiibaayo. Haweeneydi wey faraxday waxeyna bilaawday iney uduceyso waxeyna tiri allah ku daayo kuna siiyo xaas fiican. Ninkii jiranaa intuu yara dhoola cadeeyay ayuu ku yiri ani xaas waan leeyahay. Haweeneydi ayaa tiri waxaan ku dhaho Ayaan garan waayay farxad darteed ee allah kusiiyo owlaad kheyr qabto kuuna fududeeyo waxaad rabto. Ninkii jiranaa ayaa wuxuu kulaabtay isbitaalkii hal isbuuc kadib si'uu qaliinka ugalo. Doctor qaliinka kusameynaayay ayaa uyimid Ninkii jiranaay intii aan qaliinka lagu bilaawin ayaa labaaray ninkii misane doctor wuxuu layaabay cudurkii Kansarka(saradaanka) ooba ka dhamaaday jirka ninka . Doctor wuxuu dhahay macquul ma ahan maxaad sameysay. Ninkii jiranaa ayaa yiri hee doctor maxaad aragtay. Doctor ayaa ugu jawaabay Ninkii jiranaa qaliin iska daaye xitaa marabtid wax daawo eh sababta oo eh caafimaadkaada hada waa dhameystiran yahay oo cudurkii kansarka jirkaada wuu ka baxay.
FIIRO GAAR AH:Qisadani waa qiso kutuseysay Sadaqada iney daawo tahay sida axaadiis badani ey kusoo aroortay
Qofka wax Sadaqeystane waxuu kamid yahay todoba qof ee loobalan qaaday iney maalinta qiyaamaha harsan doonaan hooska Allah maalintaas oon hoos jirin ilaa hooska allah ma oyaane sida xadiiskani kusoo aroortay
قال رسول اللة صلي اللة علية وسلم: سبعة يظلهم اللة في ظله يوم لا ظل إلا ظله ودكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتي لاتعلم شماله ماتنفق يمينه متفق عليه
AminaDiamond added a post in a topic: Waa maxay Content Management system (CMS)? 19 May 2015
Content management system (CMS): waa system kuu fududeynaayo sida aad u manage gareynlaheyd Macluumaad kaada
waa Maxay Content? Content waa Macluumaad leh nooc kasto sida digital information
Maxaa loola jeedaa Management(Xafidid ama habeyn) Marka loo fiiriyo content (Macluumaad ka)? sababta oo eh macluumaadka waxaa loo habeeyaa dabiiciyan si digital eh ama xisaabaad eh sidoo kale macluumaadka waxaa loo xifdiyaa sida electronically (macnaheedu yahay Internet ama software)
Waa Maxay System ka xifdiyo macluumaadka ?
System waa software tool oo wax ku ool eh waxna qabata hadane habeeyo macluumaadka si loo gaaro natiijo wax ku ool eh.
Tusaalayaasha ugu caansan CMS: Web content Management. Document Management. portal content management iyo sidoo kale.